Ukuhamba ku-Studio sangasese uya e-Indy - I-Airbnb
Ukuhamba ku-Studio sangasese uya e-Indy
549 okushiwo abanye
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Matthew
Jabulela isitudiyo segumbi langaphambili elalungiswa kabusha endlini ethokomele eyakhiwa ngeminyaka yawo-1900. Itholakala kalula imizuzu eyi-15 ukusuka edolobheni (isikhathi sokuhamba) nezindawo ezishisayo eziseduze, okuhlanganisa: I-Lucas Oil Stadium (ikhaya lama-Colts), i-Bankers Life Field House (ikhaya lama-Pacers), i-City Market, kanye ne-Georgia Street. Nge-Bird noma i-Lime rideshare scooters, i-Indy ikude ngemizuzu nje. Uzoba nemizuzu eyi-10 kuphela ukusuka esifundeni samasiko seFountain Square, esigcwele izindawo zokudlela, izitolo zekhofi, imigoqo namapaki.
Lesi sikhala sinombhede wendlovukazi owodwa kanye ne-queen air umatilasi owodwa. Ezinye izinsiza zihlanganisa ikhishi eligcwele (ipuleti elishisayo nohhavini we-toaster).
Indawo yokupaka emgwaqweni iyatholakala ezimotweni ezi-2 amafithi ambalwa ukusuka kuvulandi ongaphambili.
4.85 out of 5 stars from 549 reviews
4.85 · 549 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-549
Ngingathanda ukuxoxa ngikubonise idolobha. Ngiyakuthanda ukuhlangana nabantu abasha kodwa empeleni ngibona amasonto okusebenza amahora angu-70 ehlobo ngakho ukuxhumana kwami nawe cishe kuzoncipha kakhulu. Ngihlale ngitholakala ngocingo emini noma ebusuku futhi ngihlala ngakolunye uhlangothi ukuze sikwazi ukukhuluma ngokwedlulele.
Ngingathanda ukuxoxa ngikubonise idolobha. Ngiyakuthanda ukuhlangana nabantu abasha kodwa empeleni ngibona amasonto okusebenza amahora angu-70 ehlobo ngakho ukuxhumana kwami nawe c…